FSX Boeing 747-400 Aerolineas Argentinas Speedbrake arrinta
Su'aal FSX Boeing 747-400 Aerolineas Argentinas Speedbrake arrinta
Bilood 8 3 maalmood ka hor #1112 by daveh
Hambalyo, goob weyn! Waxaan dhowaan soo dejiyey xirmooyinka FSX B747-400 Aerolinias Argentinas. Dhamaantiis waa weyn, marka laga reebo marka aan gawaarida korontada ku dhejiyo si tartiib tartiib ah u soo dego, ma yareeyso diyaaradda. Waxay si buuxda u direysaa, laakiin waxay u muuqataa in aysan saameyn ku yeelan xawaaraha. Sidoo kale, xaddiga ugu yar ee la hayo waa agagaarka 31% si loo helo xawaaraha koritaanka ee aadka u adag si loo xakameeyo. Fikradaha ama caawimaad kasta oo ku saabsan sidii looga gudbi lahaa arimahan ayaa si aad ah u baara.
user soo socda (s) ayaa sheegay in Waxaad ku mahadsan tahay: fmartinez